macaamiisha - Feinade korontada Qalab Co., Ltd
Zhuhai co technology Geed. LTD
Waxaan had iyo jeer ahaa saaxiibo isaga la sanado badan, iyo sababta aan ahay si kalsooni ku qaba in ay iskaashi isaga la yahay, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in uu yahay hoggaamiye khibrad leh, akhlaaq leh oo is-hoosaysiiya kii uu ula socdo The Times. Waxaa lagu soo koraya. Waxaan aaminsanahay in hoos imaanaya hoggaanka Hogaamiyaha aad u fiican, oo ay weheliyaan taxane ah oo wax soo saarka leh sumcad wanaagsan sida, feynard hubaal dheereysa oo dheer tegi doonaa. Oo weliba dheeraad ah waxaan aaminsanahay in gooyo ku nool ilaa doonistiisa.
Zhuhai technology Geed co., LTD. - Agaasimaha koonfurta Shiinaha - carruurta guoqiang
Zhuhai technology pinuo co., LTD. Waa shirkad maamusha nidaamka korontada dhismayaasha dadweynaha. Waxay leedahay saldhig cilmi sayniska ee 20,000 mitir oo laba jibbaaran. Waxay leedahay xarumaha d r & in zhuhai zone-farsamada casriga ah iyo Shenzhen sayniska nanshan iyo technology park, laamood ee Beijing, Shanghai iyo Shenzhen, iyo in ka badan 20 xafiisyo Shiinaha. Shan fulinta injineernimada iyo xarumaha adeega farsamo ayaa la dhigay ilaa waqooyiga China, bari Shiinaha, koonfurta Shiinaha, waqooyi-galbeed Shiinaha iyo koonfur-galbeed Shiinaha, iyo shabakad marketing iyo hirgelinta hindisaha baaluq oo kaamil ah ayaa la aasaasay
Ningbo aimei-dongxiong saarka co. LTD
Sida la og yahay in dhan, baahida loo qabo ilaalinta motor in our warshadaha waa ujeedada. Waxaan u baahanahay in la helo qeybiyaha ah faa'iidada iyo ka dhigi alaabta iyo qalabka waxay leeyihiin saamayn brand wanaagsan. Keliya guul - guul ka dhigi kara xiriirka ganacsi iskaashiga dheer! Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa in aad ka heli qeybiyaha wanaagsan, saaxiib wanaagsan!
Ningbo aimei-dongxiong saarka co., LTD. - guddoomiyaha guddida - Huang Guo-Sheng - takhasusay ee design iyo warshadaha ee hirka sare hirka sare mishiino ah ee hirka sare
Ningbo aimei-dongxiong saarka co., LTD. Waa soo saaraha xirfadle ah "dongxiong brand" mashiinka hirka sare alxanka caag ah, mashiinka alxanka caag ah ultrasonic iyo jarida mashiinka. Waxaan astaysto qalabka qalabka qalabaynta iyo mishiinada aan caadiga ahayn sida uu sheegay looga baahan yahay qofka macaamilka ah ee.
co Shiinaha gaaska huayi. LTD
Shirkadda Our ayaa waxaa ku qoran in February 2007, suuqa of Roobka gobolka, shan kooxood korontada, batroolka, warshadaha kiimikada, tareenka, habka warshadaha iyo wax soo saarka oo daboolaya. In kaliya labo ama seddex sanno, feinald ayaa wadaag muhiim u ah Shirkadda. My aragti of feynard waa in dantu ugu samra, gaarsiinta waa waqtiga, iyo taageero farsamo xirfadeed. Waa sida aqoonta asaasiga ah feynard ee: waxa ku saabsan adeegga. Waxaan aaminsanahay inay noqon kartaa fiican si kasta, iyo feynard waa lammaane istaahilo.
Zheng xiaohua, oo agaasime ka ah wada gaaska huayi Shiinaha., LTD
Huayi gaaska co., LTD. (Halkan loogu yeeri sida "gaaska huayi" si) waa hoosaad ah xudunta u haysta ee huayi group co korontada., Ltd. magaalada leqing, wenzhou magaalada, gobolka Zhejiang. Approved by securities komishanka sharciyeed ee Shiinaha (CSRC) ma.  lahayn. 286, waxaa lagu dib-u-ku qoran Shanghai stock exchange on February 1, 2007 oo leh code stock of 600290 ah
co maamulka gacanta si toos ah (Shanghai) Danfoss. LTD
Shirkadda Our ayaa ku hawlan qaboojiye iyo qaboojiyaha xal gacanta. Marka laga eego dhinaca ganacsiga, waxaan sidoo kale waa qeybiyaha ah. Hadafkeenu waa in ay sameeyaan dadaal kasta si ay u hagaajiyaan tayada fiican iyo waxyaabaha qiimaha macquulka ah iyo adeegyada si ay u sameeyaan macaamiisha badan oo tartan ka. Oo feynard waa in line la our falsafada. Shirkadda Our inta badan ISTICMAALKA motor ee 18.5kw-110kw, iyo iibka iyo kooxda farsamada ee feinade inta badan booqo Shirkadda, samaynta qaar ka mid ah xidhiidhka farsamada nala, naga caawinaya si wadajir ah u xaliyaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka qalabka, iyo ina siinaya qaar ka mid ah soo jeedina wax ku ool ah. Alaab fiican ma aha oo kaliya iibiya alaabta, laakiin waa u xiiseynayey in ay macaamiisha, qabaa waxa ay macaamiishu rabto, oo taagan meel macaamiisha ah ee ah in la tixgeliyo dhibaatada!
co maamulka gacanta si toos ah (Shanghai) Danfoss. LTD. - sunbin
Danfoss (Danfoss) waa mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee caalamiga ah wax soo saarka warshadaha ee Denmark, aasaasay 1933. Danfoss lagu yaqaan kor u qaadida adeegsiga tiknolojiyada saarka sare iyo diiradda on ilaalinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka. Danfoss waa soo saaraha iyo adeeg bixiye adduunka ee hormuudka ka ah qaboojiye iyo qaboojiyaha gacanta, kulaylinta iyo gacan ku haynta biyaha, iyo gacanta la isugu gudbiyo.